R. D. Congo: Fahaleovantena “Cha Cha” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jolay 2010 8:31 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Français, বাংলা, Español, English
Manadihady an’i Albert Kalonji, izay raisina ho toy ny iray amin’ireo ‘rain’ny fahaleovantena Kongole’ sy mpitolona mpitaky fizakantena ary mpanohitra ara-politika an’i Patrice Lumumba, i Mboka Mosika [fr]. Hoy izy, “Afaka mifaly amin’ny nahazoantsika ny fahaleovantena isika , na dia teo aza ireo fotoana tsy hay noararaotina … toy ireo ady sivily izay niseho, sy ny tsy fahampian’ny fifehezana hentitra sy ny traikefa teo amin’ny fitantanana ny raharaham-bahoaka , izay andraikitr’ ireo mpitondra ara-politika.”
Ahoana no fomba hitazonantsika an'i Kinshasa hadio? Tohizo ny fanasàna ny mpanjaka Belza! ( Sarimiaina avy amin'ny CongoBlog; nahazoana alalàna.)
Mamerina maneho ny lahateny nataon’ny mpanjaka Belza Joseph Kasa Vubu sy i Lumumba tamin’ny tena lanonan’ny fahaleovantena tamin’ny taona 1960 [fr] i Banacongo.
Mihevitra i VieuxVan fa ny finday [fr] no mba hany tena fivoarana marina mba hitan’ny ‘mponina’ ao RDC taorian’izay. Mahita fivoarana ao Goma kosa i Texas in Africa , na izany aza, mifanohitra amin’ny sary famaritan’ny seraseram-baovao mikasika toerana iray hoe “ny vehivavy Kongolezy rehetra dia niharan’ny fanolanana ary ny lehilahy rehetra dia mpamono olona ”:
Nitafatafa tanaty aterineto tamin’ny namako maro taloha aho ary nihaona tamin’ny maro amin’ireo vaovao, teto an-toerana, tamin’ity herinandro ity, ary ny lohahevitra iray iraisana tamin’ireo fifampiresahana dia ny fahadisoam-panantenana tamin’ny tantaran’i Goma izay mbola tsy resahana ihany amin’izao fotoana izao. Araky ny nametrahan'ny olona iray azy ity, raha raisina amin’izay teny ilazan'ny seraseram-baovao azy, dia hihevitra ianao fa ny vehivavy Kongolezy rehetra dia efa niharan’ny fanolanana ary ny lehilahy rehetra dia mpamono olona. Tsy izay no tena zava-misy marina eto .
Inona àry? Amin’ny taonina ny fandraharahana vaovao misokatra, efa lasa ny fandrahonana ary nitombo naka ny toeran'izy ireny ireo tranobe maro rihana, ary betsaka ny orinasa natsangana. Niha-nivoatra ny foto-drafitr’asa, mihoatra noho izay nantenaiko ho vita. Efa vita làlam-bato ny làlam-be eo amin’ny tanàna afovoany
Niantso i Congoblog , ny andro taorian'ny filatroana, fa mendrika ny tokony hahazo andro tsy iasana ireo ‘mahery fon’ny fitsingerenan’ny faha-50 taona ‘ [fr]:
Ny mpandoko, ny mpanadio sy ny mpiasa maro hafa izay niasa mafy mba hanatsara ny endrik’i Kinshasa, ka mba nahafahan’ny ankizy sy ny mpivarotra eny amoron-dalana niaina indray tamin’ny farany ary niverina eny am-povoan-tanàna. Indrisy anefa, ho afaka ve ny polisy mpandrindra fifamoivoizana, izay noraràna tsy hanenjika ny mpamily: “Mahalala ny sasany aho izay mikosika ny tanany roa. Hahita faisana izao ireo mpamily.”